सालिकराम पुडासैनी केटीसँग बस्ने गरेको गोप्य घर ! घरबेटी आइन् मिडियामा – PanchKhal Online
Home/समाचार/सालिकराम पुडासैनी केटीसँग बस्ने गरेको गोप्य घर ! घरबेटी आइन् मिडियामा
श्रीमती सम्झना घिमिरेसँग बालाजु माछापोखरीमा कोठा लिएर बस्ने पुडासैनीले बिदा र फुर्सदको समयमा प्रेमिकालाई भेट्न टोखा नगरपालिका ११ महादेवटारकी गोमा न्यौपानेको घरमा कोठा भाडामा लिएको फेला परेको हो । महानगरीय प्रहरी परिसरको टोलीले पुडासैनीको कोठाबाट पुडासैनी र उनकी प्रेमिकाको फोटोसहित केही कागजात बरामद गरेको छ ।
पुडासैनीले एकजना केटीसँग खिचेको फोटो, लालपुर्जा, शेयर प्रमाणपत्र, सुन किनेको बिललगायत सामग्री बरामद गरेको वडाध्यक्ष उत्तम अधिकारीले जानकारी दिए । प्रहरीले उक्त फोटो पुडासैनीले आरोप लगाएकी अस्मिता कार्कीको हो या अन्य कसैको हो, खुलाउन चाहेन । घरबेटी गोमा न्यौपानेले पुडासैनी कोठामा केटी लिएर कहिलेकाहीँ मात्रै आउने गरेकोबताइन् ।